Jurgen Klopp Oo Shaaciyay Wixii Uu Qaban Jiray Waqtigii Go'doonka Iyo Hadal Uu Ku Ganay Gary Neville. - Gool24.Net
Jurgen Klopp Oo Shaaciyay Wixii Uu Qaban Jiray Waqtigii Go’doonka Iyo Hadal Uu Ku Ganay Gary Neville.
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa shaaciyay wixii uu qaban jiray waqtigii go’doonka lagu jiray wuxuna hadal duur xul ah ku ganaxay khabiirka Sky Sports ahna halayaygii Man United ee Gary Neville.
Intii uu xili ciyaareedka Premier league hakadka guu jiray Fayraska aduunka kala xidhay waxa uu Gary Neville marar badan isku dayay in uu u ololeeyo in xili ciyaareedka la kansalo isaga oo aan wax qarsoodi ah ka dhigan cadaawada uu Liverpool ugu hayo in ay koobka seegaan.
Laakiin Jurgen Klopp oo la waydiiyay wixii uu ka soo bartay go’doonkii labada bilood ahaa waxa uu xusay in aanu waxba soo baran balse uu dib u daawaday dhamaan kulamadii cajiibka ahaa ee kooxdiisu ay xili ciyaareedkan layaabka ku soo dhigtay wuxuuna duur xul u raaciyay Gary Neville.
Klopp ayaa sheegay in uu la socday dhamaan fikiradihii uu bixinayay Gary Neville ee xili ciyaareedka la xidhiidhay wuxuuna ku tilmaamay waxyaabo layaab lahaa.
Dhinaca kale Klopp ayaa ku dooday in aanu marnaba helin fursad uu dib ugu daawado kulamadii ay kooxdiisu taariikhda ku soo dhigtay wuxuuna sheegay in muddadii go’doonka lagu jiray uu taas si buuxda uga bogtay.
Jurgen Klopp oo ka jawaabaya wixii uu ka soo bartay go’doonkii laga soo daayay ayaa yidhi: “Anigu waxba kamaan soo baran intii lagu jiray go’doonka oo aan ka ahayn in Gary Neville uu bixiyay fikradiisa oo xaqiiqdii wax walba ku saabsanayd. Layaab ayay ahayd!”.
Klopp oo ka hadlaya wixii uu samayn jiray xiligii go’doonka ayaa yidhi: “Anigu dib umaan fadhiisan oo kamaan fikirin mustaqbalkayga ama wixii la soo dhaafay. Xaqiiqdii waxaan daawaday muuqaalo badan oo ah kulamadayadii. Anigu marnaba hore waqti ugumaan helin, in badan ayaan ku raaxaystay taas”.
Intaas kadib Klopp ayaa ka hadlay sida uu ugu xiisay wiilasha kooxdiisa iyo Melwood oo uu ku soo laabtay wuxuuna yidhi: “Waxaan in badan u xiisay wiilasha. Wixii aanu abuurnay muu ahayn kooxda iyo wiilasha oo kaliya laakiin waxay ahayeen dhamaan dadka Melwood oo dhan ee aanu Zoom iyo telefoonka tooska ah isku arkaynay, laakiin wali sidii hore lama mid aha”.
Klopp oo dareenkiisa ku soo laabasho ee Melwood ka hadlaya ayaa yidhi: “Ku soo laabashada Melwood, wixii aanu caadiyan u samayn jirnay waa waxa aan anigu u xiisay”.
Klopp iyo kooxdiisa Liverpool oo hadda dib ugu soo laabtay Melwood ayaa sugaya waqtiga rasmiga ah ee ay kulamada Premier league dib u furmi doonaan iyada oo dawlada UK ay hadda si rasmi ah u ogolaatay in horaanta bisha June xili ciyaareedka dib loo furo.